Madaxweyne Farmaajo oo Fariin u diray Maamul goboleedyada kuna Baaqay Midnimo | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Farmaajo oo Fariin u diray Maamul goboleedyada kuna Baaqay Midnimo
MUQDISHO – Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray Warsaxaafadeed ku aadan shirkii madaxda maamul goboleedyada ugu soo dhammaaday magaalada Kismaayo ee Jubbaland.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku baaqay midnimo.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa qoraal kasoo baxay lagu yiri” Madaxweynaha wuxuu si dhaw ula socdaa dareenka ay muujiyeen madaxda Dowlad Goboleedyada, waxa uuna hoosta ka xarriiqayaa in ay lagama maarmaan tahay wada shaqeynta hey’adaha Federaalka iyo hey’adaha heer Dowlad Goboleed si looga mira dhaliyo waajibaadka dastuuriga ee na wada saaran iyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed”.
Dhammaan madaxda dalka ee heerarka kala duwan waxaan xasuusinayaa inuu dalkeenu ku jiro dib u kabasho dhinac walba leh, waddada kaliya ee lagu gaari karo dib u kabasho dhameystiranna ay tahay midnimo iyo wadashaqeyn ku dhisan maslaxadda guud oo ah midda aan dhammaanteen u dhaarannay.” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in mar walba imaan karto dhaliilo iyo dal-daloolo ka yimaada Wadashaqeynta heerarka kala duwan ee dowladda.
Waxaase laga maarmaan ah buu yiri in lagu xalliyo Wadahadal iyo isqancin u dhaxeysa Madaxda iyo hay’adaha iyada oo la raacayo habraaca Dastuurka iyo qawaaniinta dalka.